About Us - Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd.
Pallet Amanqwanqwa System
Ikhetha Pallet Amanqwanqwa
Drive Pallet Amanqwanqwa
Nciphisa kakhulu yezinto Pallet Amanqwanqwa
Double Deep Pallet Amanqwanqwa
Gravity Flow Pallet Amanqwanqwa
Push Back Pallet Amanqwanqwa
Mezzanine Floor Pallet Amanqwanqwa
Cantilever Pallet Amanqwanqwa
Storage kweeshelfu System
Boltless Rivet kweeshelfu
Ukukhanya Duty kweeshelfu
Long span kweeshelfu
Slotted Angle kweeshelfu
Umgqomo wokuGcina iPlastiki
Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2001 Thina ngumvelisi kunye umthengisi yoluhlu olubanzi yokugcina mveliso kunye nezorhwebo unwele iinkqubo nezinto yokuphatha Equipments.
Thina ukugxininisa thethwano, uyilo, kunye nokufakelwa lomfana yokugcina izisombululo; nikeza ngezinto ezahlukahlukeneyo kokuphatha izixhobo kumacandelo ahlukeneyo mveliso kunye nezorhwebo kunye namaziko abucala & karhulumente kulo lonke ihlabathi.
Sisebenzisa materials kwizinga eliphezulu ezibonelelwa Shanghai Baosteel Group (i mveliso sentsimbi inkulu China). Thina advanced Auto electrostatic nomgubo ukupeyinta line kunye neenkqubo zokucoca pre-unyango 2.
Xa Spieth, sikholelwa ekubeni ezise iimveliso kunye nezixhobo siqinisekiso inqanaba eliphezulu umgangatho ukuthotyelwa kunye nemigangatho yamashishini. Kananjalo siyakholwa ukuba zonke iintengiso kunye neprojekthi, ngaphandle kobukhulu, okanye ixabiso, bafanelwe inkxaso yethu ukusukela kwisicwangciso ukuya kwinkonzo yethu entle emva-ukuthengiswa.
Ukuze inkonzo engcono abathengi bethu, siye saseka pre-yentengiso kunye nenkonzo emva-yentengiso kwaye wenza iinzame ukunika iinkonzo zayo nge emihle, ngexesha kunye neenkonzo zobugcisa elizayo ebomini. Spieth ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo abathengi bethu, ukuphucula ulwaneliseko umxhasi, ukuseka ixesha elide ubudlelwane iqabane win-win nawe!
Ifilosofi yethu kukunceda ukuba wenze ukusetyenziswa ngokupheleleyo nendawo yokugcina, nokuphakanyiswa kwakhe ukusetyenziswa yemvume database, ukukwazi ulwandiso yokugcina impahla. Kwakhona ukunciphisa iindleko, zonke intshi yonke Dime elungiselelwe kwi ngobunjineli Products.
Singabantu mveliso kunye umniki kumqolo obanzi weendlela yokugcina unwele mveliso kunye nezorhwebo kunye nezinto yokuphatha Equipments ukususela ngowama-2001 Ingxenye uthenga kwi Spieth Amanqwanqwa ibonelelwe iwaranti kunyaka-10.
Ipaki yaseTongan, kwiSithili saseTongan, eXiamen, eTshayina
Phone: +86 15759222268
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved.闽ICP备17021624号 Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
Warehouse Pallet Amanqwanqwa System , Pallet Amanqwanqwa yoMkhuseli , gravity Flow Amanqwanqwa , Warehouse Pallet leposi , enamavili wocingo Isikhongozelo , Pallet Amanqwanqwa kwezibonda ,